Abu Dhabi | Ebe 8 ndị njem na ebe nkiri ị ga-eleta
Abu Dhabieze 212022-05-23T17:09:39+05:30
Isi obodo nke UAE, Abu Dhabi na-enye ngwakọta na-adọrọ adọrọ nke ọdịnala na ọganihu. Ọ na-achịkọta ịma mma ụwa ochie na obodo mepere emepe na gburugburu ebe dị ọcha na nchekwa. Obodo Arab mara mma, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na nke pụrụ iche, na-agbalịsi ike ichekwa ma kwalite ọmarịcha ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme nke Emirate, na-amata ọrụ dị mkpa ọ ga-arụ n'ịkpụzi ọdịnihu. UAE. Ebumnuche obodo a maka ito eto site n'ilekwasị anya siri ike na nchekwa gburugburu ebe obibi, mmepe obodo, yana nkwalite omenala na nka nka mpaghara na ụwa.
Azụmaahịa na Abu Dhabi
Abu Dhabi bụ ebumnuche-ewu maka ọganiihu azụmaahịa ma bụrụkwa onye ama ama maka ụlọ ọrụ njem azụmahịa na-aga nke ọma yana asọmpi. Abu Dhabi, na-enye ụlọ ọrụ njem nlegharị anya azụmaahịa nke ụwa, uru nke mpaghara mpaghara efu, yana uto nke okporo ụzọ diplomatic na gọọmentị metụtara. N'ịbụ nke dị n'etiti East na West, ụgbọ elu dị na Abu Dhabi na-enwe ike itinye ego na ahịa azụmahịa na njem nlegharị anya na. Asia, Africa, na Eastern Europe.
Ebe 8 ndị njem na ebe nkiri ị ga-eleta na Abu Dhabi
Ụlọ ihe ngosi nka nke Zayed National Museum
Ihe ncheta nke mbubreyo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan bụ centerpiece nke Mpaghara Omenala Saadiyat Island. Ọ na-egosi akụkọ ihe mere eme, omenala, mgbanwe mmekọrịta ọha na eze na nke akụ na ụba nke Emirates.
Yas Island bụ otu n'ime ebe kacha atọ ụtọ na Abu Dhabi na-enye ahụmịhe dị ịtụnanya. Naanị ihe mmadụ mere, Yas Island bụ ebe ntụrụndụ na-apụta n'ime nkeji 30 nke ụgbọ ala ahụ. UAE isi obodo.
Alakụba Sheikh Zayed
Sheikh Zayed Grand Mosque dị na isi obodo UAE ma bụrụ isi ihe na-adọrọ mmasị na obodo ahụ. Ọ bụ otu n'ime ụlọ alakụba kacha ibu n'ụwa, nwere ikike maka ndị na-efe ofufe 40000.
Warner Bros. .wa
Warner Bros. World™ dị na Abu Dhabi, Warner Bros nke mbụ n'ụwa nwere ama ama ama ama ama ama n'ime ụlọ! Warner Bros. World™ dị na Abu Dhabi nwere ala imikpu isii.
Ụlọ ihe nkiri Emirates
Emirates National Auto Museum bụ nchịkọta ụgbọ ala nke na-egosi ụgbọ ala dị iche iche na ụgbọ ala ndị America. 'Pyramid' a nwekwara ụlọ nke HH Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan.
Louvre Abu Dhabi bụ ụlọ ngosi nka na mmepeanya, nke dị na Abu Dhabi.
Ihe ọzọ dị ịtụnanya na Ọwara Arabian bụ ogige ntụrụndụ ime ụlọ kacha ibu n'ụwa, Ferrari World. Dị na Isuo Yas, Ferrari World juru ọtụtụ ndị na-eme njem juru ndị gbara ọsọ ndụ ya anya.
Qasr Al Watan bụ ihe ịtụnanya, ọhụrụ na akara pụrụ iche na mpaghara ahụ United Arab Emirates. Obí juputara na ihe ọmụma, na-enye ụwa ụdị izizi ụdị ihe nketa Arab na ụkpụrụ nchịkwa nke kpụbere akụkọ ihe mere eme nke United Arab Emirates na ọhụụ ya n'ọdịnihu.